Milina medaly CE tsara indrindra mpanala volo / diode 808 famerenana laser ny mpanamboatra sy ny orinasa | KES
Masinina fanesorana volo IPL
Masinina Laser IPL
Laser tamin'ny SHR
Masinina fanesorana volo laser
Masinera fanesorana volo Laser Diode
Q Mihodina Laser Machine
Q Novaina Nd Yag Laser
Masinina Laser Pico
Milina fanaovana sary sokitra mahafinaritra
Masinina mampihena ny cryo
Milina fanaovana sokitra vatana
CO2 Masinina laser tapaka
Masinina laser laser-piatoana
Masinina laser tapaka
Masinina Cavitation Ultrasonic
Masinina RF Cavitation
Masinina HIFU Facelift
Masinina vita amin'ny Oxygen Jet Peel
Masinina Hydro Facial
EM Sculpture Machine
Milina CE vehivavy milina fanesorana volo / diode 808 laser reviews
Diode Portable Laser Hair Removal Machine, Diode Laser System Machine Alemana Laser Emitter Wavelength 808nm
fanesorana laser laser, milina fanesorana volo laser
Ny rafitra dia mampiasa ny halavan'ny volom-borona manala volo 808nm diode ho an'ny fidirana lalina ao anaty dermis izay misy ny follicle volo. Amin'ny fomba fitsaboana, andiam-pitenenana malefaka ambany, ny pulses famerimberenana avo dia mampiakatra ny mari-pana amin'ny follicle volo sy ny manodidina, ny sela mamelombelona hatramin'ny 45 degre Celsius. Ity fandefasana hafanana miandalana ity dia mampiasa ny chromophores ao anaty vatan'ny manodidina azy ho toy ny fitoeram-bolo hanafana ny folon'ny volo. Io, miaraka amin'ny angovo hafanana entin'ny folikelin'ny volo, dia manimba ny follicle ary misoroka ny fitomboana indray. Ny masinina laser diode808nm dia mandaitra indrindra amin'ny melanositry ny folika volo nefa tsy misy ratra manodidina ny sela. Ny hazavan'ny laser dia azo tototry ny volo sy ny volo ao amin'ny melanin ary ahodina ho hafanana ary hampiakatra ny hafanan'ny fololon'ny volo. Rehefa miakatra ny mari-pana ampy hanimba ny firafitry ny volo, izay manjavona aorian'ny fizotran'ny fizolo voajanahary ny follicle volo ary hahatratra ny tanjon'ny fanesorana volo maharitra.
Modely NO. MED-808m
Laser karazana Diode avo lenta / vidin'ny milina fanesorana volo amin'ny laser
halavan'ny onjam 808nm Standard755nm, 1064nm, Tri-wavelength tsy voatery
Toerana azo ovaina 9 * 9, 12 * 12, 12 * 18 tsy voatery
Haben'ny habe 12 * 12mm²
Tombana famerenana hatramin'ny 10HZ
Fiteny 10-125J / CM2
Hery lehibe 2500W
Famaritana ny sehatra 100-240VAC 12A MAX / 50-60HZ
Lanja afa-karatsaka 27KG
lafiny 397mm * 357mm * 463mm
Fampiharana amin'ny laser fanesorana volo 808nm laser diode laser: fanesorana volo maharitra maharitra amin'ny karazana hoditra rehetra; tsy misy fanaintainana, tena ahazoana aina mandritra ny fitsaboana; Mety ho an'ny volo tsy ilaina amin'ny faritra toy ny tarehy, ny sandry, ny armpits, ny tratra, ny lamosina, ny bikini, ny tongotra… izy io koa dia manavao ny hoditra ary mihamafy ny hoditra amin'ny fotoana iray.
1) Fampihenana ny volo maharitra amin'ny volo misy loko rehetra sy ny karazan-koditra rehetra, anisan'izany ny hoditra vita amin'ny hoditra.
2) Tsy misy fanaintainana, tsy misy volo - fanesorana volo ahazoana aina
·Safe sy Mahazo aina, tombony roa sosona
Ny vidin'ny milina fanesorana volo amin'ny laser miaraka amin'ny TEC Active Cooling Modular dia mitondra vokadratsin'ny kambana. Manomboka miasa ny Double TEC raha mihoatra ny 25 ° C ny mari-pana amin'ny rano, hahazoana antoka fa mari-pana ny rano eo anelanelan'ny 25 ° C sy 30 ° C, ary ny safira madio mangatsiaka ampy. Amin'ity tranga ity dia misy ny fitsaboana azo antoka sy azo antoka indrindra. Ny fotoana iasana maharitra maharitra dia hampitombo ny orinasao.
·Easy Touch sy Intellectual Diagnostic System
Ny vidin'ny milina fanesorana volo amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mora mikasika dia manome fampiasa natokana ho an'ny karazan-koditra sy loko volo hamarana ny mpampiasa, dia tsy manahirana intsony ny fandidiana. Ny rafitra diagnostika hadisoana Smart dia manome Working Notes ho an'ireo singa manan-danja toy ny mpankafy, ny paompy ary ny rafitra fampangatsiahana. Ny antsasaky ny fotoananao sy ny vidinao dia manambola aorian'ny serivisy fivarotana.
Talohan & Aorian'ny
Fonosana Raharaha mahazatra momba ny sidina
Delivery Ao anatin'ny 3-4 andro fiasana
Fandefasana Isam-baravarana (DHL / TNT / UPS / FEDEX…), Amin'ny rivotra, Amin'ny ranomasina
Ny serivisintsika / Warranty
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina anay dia manome serivisy manaraka izahay:
Vidiny 1.Lower ho an'ny masinera fanesorana volo laser, vidiny mifanentana ho an'ireo mpaninjara
2. Fiantohana herintaona sy fikojakojana ny androm-piainana
3. Amin'ny fandefasana ara-potoana.
4. Antoka avo lenta ..
Inona ny fanesorana volo laser diode fitsaboana?Ny vidin'ny milina fanesorana volo amin'ny laser dia mampiasa teknolojia semiconductor izay mamokatra vinavinan'ny jiro mirindra amin'ny halaviran'ny infrared. Ireo toetra tsy manam-paharoa ireo dia mahatonga ny laser diode ho teknolojia mety indrindra amin'ny fanesorana ny volo laser, ahafahan'ny fitsaboana azo antoka sy mahomby amin'ny karazana hoditra sy volo rehetra, amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana.
Inona no azoko antenaina?
Ny hazavan'ny laser dia miteraka fahasimbana maharitra amin'ny fololon'ny volo ary manakana ny fironana hitombo. Amin'ny fitsaboana fanesorana volo laser diode, ny jiro laser dia misy fiantraikany amin'ny volo maniry fotsiny. Heverina matetika fa ny fanesorana volo laser dia mitarika amin'ny fanesorana maharitra ny volo.
Inona koa no tokony hataoko rehefa mandeha fitsaboana laser aho?
Sorohy ny fiposahan'ny masoandro / manao tanna mandritra ny 7-10 andro manaraka.
Teo aloha: Masinina fanesorana volo CE ho an'ny vehivavy / milina fanesorana volo maharitra ho an'ny lehilahy
Manaraka: Mividy CE ny milina fanesorana volo / milina fanesorana volo laser matihanina
Milina CE tsy manaintaina volo fanesorana volo / laser ...
Mividy medaly CE ny milina fanesorana volo / bes ...
Fitaovana fanadio volo laser tsara indrindra CE fitaovana / shr d ...
Medical CE ipl laser fanesorana volo finday / tsara indrindra ...
Laser CE fanesorana volo maivana volo / laser ...
Masinina fanesorana volo CE ho an'ny vehivavy / fanaintainana ...
Telefaona ： 18701541829
Mailaka ： info@keslaser.com
Adiresy ： TSIA. 15, Zone 2, Park Industrial Industrial Mafang, Pinggu Park, Zhongguancun Science And Technology Park, Distrikan'i Pinggu.